Posted by Om Bhandari On 9:32 AM
Posted by Om Bhandari On 8:48 PM
मानिसको उमेर बढ्दै गएपछी कपाल वृद्धि हुने प्रकृयालाई लैङ्गिक ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्न थाल्दछ । यो ग्रन्थीलाई एडरेनल ग्लाण्ड भनिन्छ । एडरेनल ग्लाण्डले केटाहरूमा र केटीहरूमा भिन्नाभिन्नै प्रकारको रस/हार्मोन पैदा गर्दछ । जसलाई क्रमशः पुरष हार्मोन - एन्ड्रोजिन र महिला हार्मोन - ओइस्ट्रोजिन भनिन्छ । एन्ड्रोजिनले दाह्री जुँगा र शरिरमा रौँ को विकास गर्न मद्दत गर्दछ । तर तालुको रौँ वृद्धिमा भने प्रतिकुल असर पार्दछ । ओइस्ट्रोजिनले तालुको कपाल बढाउन मद्दत गर्छ तर दाह्री जुँगा शरीरको रौं भने बढ्न दिदैन । यसैले स्त्री जातिमा दाह्री जुँगा आउदैन तर पुरूषहरूमा आउदछ ।
बसबाट यात्र गर्दा केही मानिसलाई किन बान्ता आउदछ ?
Posted by Om Bhandari On 8:44 PM
कसैकसैलाई बसमा यात्रा गर्दा बन्ता/उल्टी आउने समस्याले हैरान पारेको हुन्छ । बसमा चढ्दा किन 'बस' लाग्छ ?
हाम्रो कामभित्र तीनवटा अर्धवृत्ताकार नलीहरू हुन्छन् । ती नलीहरू सामान्यतया एक आपसमा समकोण परेर बसेका हुन्छन्, जुन चालसित सम्बन्धित हुन्छन् र चालको सूचना यिनै नली मार्फत मस्तिष्कको भेस्टिबुलर न्युक्लियसमा पुग्दछ । केही-कोही मानिसहरूमा ज्यादैनै संवेदनशील भेस्टिबुलर स्नायूहरू हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरू लगातार कुनै चलिरहेको गाडीमा बस्दा उनीहरूको मस्तिष्कको भेस्टिबुलर न्युक्लियस नजिकै भेगस न्युक्लिइ भन्ने स्नायुकेन्द्र पर्दछ । भेगसस्नायु उत्तेजित हुँदा सामान्यतया वाकवाकी लाग्ने र वान्ता हुने गर्दछ ।
विकिरण भनेको के हो ?
मानवको गर्भाधरणदेखी मृत्युसम्मका विभिन्न नामहरू के के हुन् ?